I-YHT Expeditions iqala kusuka ngomhlaka 1 kuJuni ..! Nanka Amahora Okuqala Isikhathi | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraI-YHT Expeditions iqala kusuka ngomhlaka 1 kuJuni ..! Nasi Isikhathi sokuqala
I-YHT Expeditions iqala kusuka ngomhlaka 1 kuJuni ..! Nasi Isikhathi sokuqala
22 / 05 / 2020 I-06 Ankara, I-26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Isifunda sase-Central Anatolia, sesitimela, JIKELELE, Isitimela esisheshayo, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, KUSASA NGAMINYE, TURKEY
izindiza yht ziqala kusuka kuJuni, amahora okuqala
Ngaphakathi nobubanzi bezinyathelo ze-coronavirus, izindiza ze-YHT zizoqala ngendlela elinganiselwe kusuka ngoJuni 1st.
Ngaphakathi nobubanzi bezinyathelo ze-coronavirus, izindiza ze-YHT zizoqala ukusuka ngomhlaka 1 Juni ezindizeni ezi-16 ezihambisanayo. Izinsizakalo eziphezulu zeSitimela Esiphezulu (YHT) phakathi kwe-Ankara-İstanbul, Istanbul-Ankara, Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Ankara, Ankara-Konya, Konya-Ankara, Konya-Istanbul, Istanbul-Konya yile elandelayo;
Nayi imithetho emisha okufanele isetshenziswe kuma-YHTs
Eminye imithetho izosebenza "ngesikhathi sokushintsha". Lokhu ngukulandelayo:
Ama-YHTs azothwala abagibeli abanomthamo wamaphesenti angama-50.
Abagibeli abangafundile ngeke bayiswe ezitimeleni. Abagibeli kumele beze namaski abo.
Abagibeli bazothola amathikithi kusenesikhathi. Kuyohlala esihlalweni abasithengile kuphela. Ngeke akwazi ukuhamba kwesinye isihlalo.
Akukho shintsho kumanani amathikithi.
Izitimela zizongenwa amagciwane.
Imephu Turkey Fast zemininingwane
Isicelo seKhodi Siqale Kuhambo Lwezitimela
UNgqongqoshe Wezempilo, uFahrettin Koca, umemezele ukuthi isicelo sekhodi yeHayat Eve Sığar (HEPP) sesiqalile kulabo abafuna ukuhamba ngezimoto zokuhamba zomphakathi ezinjengamabhanoyi, izitimela, amabhasi ngaphakathi kwezinga le-coronavirus (Covid-19) lesifo.
Iyini Ikhodi ye-HES nokuthi Ungayithola Kanjani?
UNgqongqoshe Wezempilo, uKoca, ethi ukuhamba manje kungenziwa ngekhodi le-HES, kuzohlinzekwa ngokulawulwa kwekhodi ye-HES, ngesici esizoza ngohlelo lokusebenza lweselula le- "Hayat Eve Sığar", ikakhulukazi ezindizeni ezihamba ezindizeni. Isimo sengozi sabo bonke abagibeli endizeni sizobuzwa ngekhodi le-HEPP emahoreni angama-24 ngaphambi kwendiza yasekhaya. " UNgqongqoshe uKoca uthe, "Abantu bazokwazi ukukhombisa ukuthi abanazingozi, abaguli noma bathintana ngalolu hlelo lweHayat Eve Sığar. Sizokwenza umkhuba wokuqala kwezokuhamba kokuhlangana. Uzokwazi ukuhamba ngendiza futhi uqeqeshe usebenzisa ikhodi ozothola ngohlelo lokusebenza leselula. ” wathi.
Iyini Ikhodi ye-HES?
Ikhodi ye-HES iyikhodi ezokhiqizwa ngesici esizoza ngohlelo lokusebenza lweselula le- "Hayat Eve Sığar". Ngokusekelwe kule khodi, kuzokwenziwa ukubhekwa kuqala futhi kuzonqunywa ukuthi umgibeli wamukelekile noma cha. Ukuhamba ngeplanethi nokuhamba ngesitimela kungenziwa kusetshenziswa le khodi.
Ungqongqoshe uFahrettin Koca; Ukungezelelwa kwekhodi ye-HEPP okumele kukhiqizwe mathupha sekuyimpoqo kusukela ngomhlaka 18 Meyi 2020. Ngemibuzo yekhodi ye-HES, inombolo kamazisi yabagibeli (TCKN, Passport njll), imininingwane yokuxhumana (zombili izinkundla zefoni kanye ne-e-mail) nosuku lokuzalwa luzofakwa ngokulungile nangokuphelele njengezinkambu ezidingekayo.
I-Bilecik Duruşlu YHT Expeditions Iqala ngomhlaka 8 Juni! Nawa amahora we-Expedition
Ngabe i-İZBAN service iqala ngasiphi isikhathi? Kuphela Isikhathi Sini? Nayi i-İZBAN 2020 Timetable
Ukuthuthwa Okuncishisiwe eBursa 25 Kuqala Kusukela NgoNovemba
Isicelo sokuthutha umphakathi ku-İzmir 29 Siqala Ngo-Ephreli
Isivinini esiphakeme sesitimela sezinguquko eshintshiwe kusukela namhlanje
U-Akar Uthola Ukuzibophezela Ku-TCDD! I-YHT izokuma e-Izmit ukusuka ngomhlaka 1 kuJuni
Line 250 Iqala ngomhlaka 1 Juni
UNgqongqoshe u-Akar Umenyezelwe! Ukukhishwa Kuqala Kusukela Ngomhlaka 31 Meyi
I-YHT Expeditions iqala ngoMeyi 28! Ngakho-ke lithengwa kanjani ithikithi le-YHT?
Izindiza Zezindiza Qala kusuka ku-Quarantine
I-Eurasia Rail ise-Izmir kusuka ku-2019
I-Konak Tram 2 Izokhokhwa Kusukela NgoJulayi
1 January 2019 eMoscow
Ungayithola Kanjani Ikhodi ye-HES
Iyini Ikhodi ye-HES
ngesivinini ujantshi ibalazwe Turkey
Isicelo seKhodi kuhambo Lwezitimela
Imithetho emisha okufanele isetshenziswe kuma-YHTs
Isikhathi se-İZBAN kanye ne-İZBAN Timetable 2020
I-YHT Expeditions Iqala Ngemuva Komkhosi Ngemithetho Emisha
Izivivinyo ziqala emgqeni we-Ankara-Istanbul YHT